Tetikasa Asa Avotra Mirindra: nankasitrahina ireo vondrona mendrika ao Antanifotsy | NewsMada
Tetikasa Asa Avotra Mirindra: nankasitrahina ireo vondrona mendrika ao Antanifotsy
Natolotra, omaly any amin’ny distrikan’Antanifotsy (RN7), ny loka sy ny fankasitrahana ho an’ny sokajin’olona mendrika amin’ny zavatra efatra nifaninanana ao anatin’ny tetikasa Asa avotra mirindra miaraka amin’ny Fonds d’intervention pour le développement (Fid). Voalohany ny mendrika tamin’ny Vondron’olona an-toerana miara-manao tahiry sy mifampindram-bola (Voamami), faharoa ny niavaka amin’ny fampiasana ny teknika mendrika, fahatelo ny sahanasa mendrika ary fahefatra ny vondronasa mendrika. Mahatratra 6 808 ny tokantrano misitraka ny tetikasa Asa avotra mirindra ao amin’ny distrikan’Antanifotsy amin’ny kaominina 11. Mikambana ao anaty vondrona ny mpisitraka ny tetikasa ary izy ireo no mifaninana amin’ny sehatra efatra voalaza. Tanjon’ny fifaninanana fanao ny hanatsara ny fandrindrana asa sy handrisihana ny vondrona rehetra hanome vokatra tsara. « Fitaovana ilaina amin’ny fanatsarana ny asa ny natolotra toy ny fitaovam-pambolena, ny masomboly, miampy kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro », hoy ny talem-paritry ny Fid Antananarivo, Rajao Harilala Serge.
Tao anatin’ny roa taona sy tapany nanatanterahana ny Asa avotra mirindra ao Antanifotsy, zavatra telo lehibe no vita. Fampiharana ny teknika mario amin’ny fambolena, fanomezana vola ireo mpisitraka hanaovana tetikasa madinika ary fanofanana ho fanatsarana ny tontolo eny aminy.
Ampiharin’ny mpisitraka amin’ny fiainana andavanandro ny zavatra hanofanana ary misy ny fiaraha-miasa amin’ny minisitera hafa voakasika (Fambolena, Tontolo iainana..). Nisy ny asa natao mifandraika amin’ny toe-tany sy ny toetry ny andro ao Antanifotsy tamin’ny fambolen-kazo, ny fambolena voly dongona, ny fiompiana trondro. Nihatsara ny fihariana noho ny fampiasana zezika « composte » sy ny teknikam-pambolena mahomby samihafa. « Izay indrindra ny tanjon’ny tetikasa Asa avotra mirindra », hoy ny tomponandraikitra ao amin’ny Fid Antananarivo, i Soamampiandra Manambina Nohariana.